Otu esi eji ID ihu na mkpuchi: usoro 3 na-arụ ọrụ | Nzukọ Ekwentị
Otu esi eji ID ihu na nkpuchi
Daniel Terrasa | | Mac, Sistemụ arụmọrụ
Nsogbu akpọchi gị iPhone iji ihu ihu oge nke coronavirus? Anyị na-akọwa otu esi eji ID ID na nkpuchi.
El eji nkpuchi ọ bụ ihe a na-ahụkarị n'ọtụtụ ụwa dịka ụzọ dị irè isi nwee oria a na-efe efe. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile amarawo nsogbu nke a gụnyere na ndụ anyị kwa ụbọchị, mana ndị ọrụ iPhone achọpụtala otu iwe: enweghị ike ịmeghe ngwaọrụ gị site na iji ID ID.
ID ihu bụ a teknụzụ nke Apple mepụtara na 2017 nke ahụ na-enye gị ohere ịmeghe iPhone X na ụdị ndị ọzọ, yana ịkwụ ụgwọ na ọrụ ndị ọzọ, site na ihu ihu. A na-enweta nke a site n'iji ihu onye ọrụ tụnyere ihe oyiyi nke onye ọrụ echeburu na ebe nchekwa nke ngwaọrụ ahụ. Akwa echiche. Mana onweghị onye n’ime afọ 2017 nwere ike iche n’afọ ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, anyị ga-ahụ ọnọdụ a.
N'ezie, eziokwu nke iyi ọkara ihu kpuchie na nkpuchi na-eme ka o siere ID ID ike ịrụ ọrụ nke ọma. Ma na nke a bụ nsogbu na niile iPhone ọrụ nwere obibi, si iPhone X n'ihu.
N'etiti ọgbọ ọhụrụ nke ndị ọrụ, ojiji nke ID ID, ngwa ngwa na mfe, agbanweela usoro passcode. Agbanyeghị, ugbu a a manyere ha iji ya ọzọ kpọghee ngwaọrụ ha. Ajụjụ bụ: Olee otu esi ahazi iPhone ị kpọghee site na ID ID n'agbanyeghị na ị kpuchiri ihu?
1 Ngwọta nkwụsị nke Apple
2 Esi melite iPhone iji ihu ID na nkpuchi
2.1 Usoro 1
2.2 Usoro 2
3 Mepee iPhone na Apple Watch
4 Esi gbanyụọ ID ID
Ngwọta nkwụsị nke Apple
Apple natara nnukwu mkpesa na May 2020, mgbe iji ihe nkpuchi ghọrọ iwu na ọtụtụ akụkụ ụwa. Mmeghachi omume ya ngwa ngwa: n'ime iOS 13.5 ụdị beta, usoro ahụ chọpụtara na onye ọrụ ahụ na-ekpuchi ihe mkpuchi ma gosipụta ozi na ihuenyo na-akpaghị aka iji tinye paswọọdụ. N'ụzọ ụfọdụ, ọ bụ onyinye otu nzọụkwụ azụ, ma echiche a ma ọ dịkarịa ala zere obi nkoropụ nke ndị ọrụ iPhone, bụ ndị chọpụtara na mberede na ID ID anaghịzi arụ ọrụ.
Otú ọ dị, nke a abaghịkwa uru nye ndị nwere (ma ọ bụ nwee) nsụgharị ndị gara aga. N'okwu gị, ha kwesịrị iwepu ID ihu na aka ha:
Esi melite iPhone iji ihu ID na nkpuchi
Mana nke a abụghị ezigbo azịza ya, naanị otu ụzọ gburugburu nsogbu ahụ. Ihe ndị ọrụ chọrọ n'ezie bụ inwe ike iji ID ihu na mkpuchi. N'ezie, Imeghe ihu gi ka ijiri mkpanaka gi n’ebe anaghi anabata ya nwere ike ibute nsogbu. N'ụzọ dị mma, e nwere ụzọ ndị ọzọ iji dozie nsogbu ahụ:
Ọ bụ azịza ya dịka o siri ike ma n’ezie ọ gbagwojuru anya. Na-arụ ọrụ.
Ọ na-agụnye ịmegharị ihe nkpuchi ahụ na ọkara, na-edebe otu ntị nke ejiri eriri roba, nke mere na ákwà ahụ na-ekpuchi naanị ọkara nke ihu, aka nri ma ọ bụ aka ekpe. Ọzọ ị ga-aga ntọala iPhone, nweta ID ID na ịnweta paswọọdụ anyị. Ozugbo e, ị ga-họrọ nhọrọ "Mepụta ọdịdị ọzọ".
Eleghi anya mgbe anyị mechara mgbalị ndị anyị na-emeghị, nke ga-egosi na ozi ahụ ga-adọ anyị aka ntị na ihu anyị ekpuchila, igwefoto Ezi omimi ọ ga ejedebe inyocha ihu anyị nke ọma. Ozugbo arụchara ọrụ ahụ, a ga-ekpuchi ọkara nke ọzọ nke ihu ma mepụta nyocha ọhụrụ. Mgbe nke a gasịrị, ekwesighi inwe nsogbu iji ID ID na ihe nkpuchi.
O di nwute, usoro a ọ gaghị arụ ọrụ ma ọ bụrụ na edozila ọdịdị ọzọ. N'okwu ahụ, ọ ga-anọgide na ịtinye ID ID ma hazie ya ọzọ.
Aghụghọ na-enwe ike iji Face ID na nkpuchi na
Ọ bụrụ na usoro gara aga arụghị ọrụ (ma ọ bụ na anyị nwere ọdịdị ọzọ echekwara na ID ID), ịnwere ike ịnwale usoro nke abụọ. Nke mbu, igha edogharia ID nke oma ma malitegharia, mana oge a N'oge ịme nyocha mbụ ahụ, anyị ga-ekpuchi otu akụkụ nke ihu na nkpuchi.
Ozugbo emere nke a, anyị ga-aga nhọrọ nhọrọ nke ọzọ, oge a na-etinye nkpuchi n'akụkụ nke ọzọ nke ihu gị, nke a hapụrụ na nyocha mbụ.
Mgbe nyocha abụọ ahụ, anyị nwere ike iji NJ Face mara nkasi obi na-enweghị wepu nkpuchi ahụ.
Mepee iPhone na Apple Watch
Enwere ndozi ikpeazụ na nke na-adịbeghị anya na-abịa site n'aka iOS 14.5, nke dị ugbu a na beta ma eleghị anya ọ ga-abata na iPhones na mbido Eprel.
Mepee ID ID site na Apple Watch
N'ụzọ doro anya, ọ ga-aba uru naanị maka ndị nwere Apple Watch con WatchOS 7.4 (nke dị ugbu a na beta) na onye nwere koodu passcod nwere ike n’elu iPhone ha. Ọ bụrụ na ịnweghị ya, enweghị nnukwu nsogbu. Naanị gaa Ntọala, họrọ passcode ma rụọ ọrụ passcode. Ihe ozo choro bu ka eme ka ichota aka.
Iji rụọ ọrụ Kpọghe iPhone na ọrụ Apple Watch, gaa n'ihu dị ka ndị a:
Nweta ID & passcode.
Tinye paswọọdụ gị.
Họrọ Kpọghe ya na Apple Watch.
Na-eme nke a, ọ bụrụhaala na nche dị na nkwojiaka anyị ma na-emeghe, mgbe anyị na-anwa ịmeghe iPhone anyị na ID ID (ọbụlagodi na iPhone achọpụtala na anyị na-ekpuchi mkpuchi), ya ga-emeghe na-akpaghị aka. N'otu oge ahụ, ozi ga-apụta na Apple Watch iji gwa anyị na agbachila iPhone ma dịkwa njikere iji ya.
Esi gbanyụọ ID ID
Nhọrọ kachasị mfe iji kwụsị nsogbu bụ iji gbanyụọ ihu ID dị ka ụzọ kpọghee iPhone. Usoro ị ga - agbaso:
Gbanyụọ ojiji nke ọrụ biometric ka ị kpọghee iPhone.
Mgbe ịmechara nke a, iPhone anyị ga-achọ koodu nnweta oge ọ bụla anyị kwesịrị ị kpọghee ya ma ọ bụ mata onwe anyị na Apple Pay.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Otu esi eji ID ihu na nkpuchi
Keydị ahụigodo: ole ka ha dị na isi ndịiche
Otu esi ehichapụ oyiri foto na mmemme efu ndị a